सल्यानका स्थानिय तहको राहतमा चामल मात्रै : स्थानीय उत्पादन खै ? « Salyan Today
सल्यानका स्थानिय तहको राहतमा चामल मात्रै : स्थानीय उत्पादन खै ?
सल्यान १७, बैशाख ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनको लागी सरकारले बन्दाबन्दी गरेको एक महिना बढी भैसकेको छ । बन्दाबन्दीका कारण सल्यान सुनसान छ । जसका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग सबै भन्दा बढी मारमा परेका छन् । त्यस्ता परिवारलाई स्थानीत तह मार्फत खाद्यान्न वितरण शुरु गरिएको छ ।
तर राहतका नाममा सल्यानका सबै स्थानिय तहले खाद्यान्न बाँडेका छन् अर्थात् दाल र चामल बाँडिएको छ । मकै, गहुँ, जौ, कोदो, बाँडिएको छैन भने राहतमै यस्ता खाद्यान्नको माग पनि गरिएको छैन् । राहतमा चामल बाहेक कुनै पनि स्थानिय तहले अन्य खाद्यबाली वितरण गरेका छैनन् । चामल दाङ, भैरहवा लगाएतका ठाँउबाट लाखौँ रुपैँया खर्च गरेर आयात गरेको खाद्यान्न हो ।
शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले नगरपालिकाले राहतको रुपमा चामल वितरण गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले नगरभित्रका स्थानिय बजारबाट खरिद गरेर चामल बितरण गरेका छौँ, स्थानिय उत्पादन नपाईएकाले चामल बितरण गरिएको हो, अब गहुँ, जौँ खरिद गरेर बितरण गर्ने सोचमा छौँ’ उहाँले भन्नुयो । नगरपालिकाले ९ सय बढी घर परिवारलाई राहत स्वरुप चामल वितरण गरेको उहाँको भनाई छ ।
आयातित चामल वितरण गर्दै कपुरकोट गाउपालिका
छत्रेश्वरी गाउपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले स्थानिय उत्पादन भन्दा पनि चामल खरिद गरेर वितरण गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले स्थानिय उत्पादन गहुँ, मकैँ,े वितरण गर्ने सोच बनाएका छौँ, पहिलो चरणमा हामीले चामल वितरण गरेका हौँ, अब दोस्रो चरणमा राहत वितण गर्दा स्थानिय उत्पादनलाई समावेश गर्छौ’ उहाँले भन्नुभयो । अहिले गहुँ, जौँ लगाएतका अन्न तयार नभएकाले चामल नै बाँडिएको उहाँको भनाई छ ।
संकटका बेला राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहले गाउँकै अन्न किनेर राहत बाँड्न सके स्थानीय तहहरुले स्थानीयस्तरका कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको बुझिने धेरै कृषक बताइरहेका छन् । रैथाने अन्न थन्क्याएर आयातीत चामल बाँड्नुले जनप्रतिनिधि कृषकमैत्री बन्न नसकेको जिल्लाका किसानहरुको गुणासो छ । भात मात्रै खाने प्रवृत्तिका कारण कोदो र मकै दाना वनाएर गाईबस्तुलाई खुवाउने र घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
यस्तै राहतमा बाँडिएका ‘फास्ट फुड’ले तत्कालका लागि भोक मेटाए पनि ती खाद्यबस्तुमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने र क्यालोरी नहुने स्वास्थ्यकर्मीले बताउँछन् । सल्यान जिल्ला कर्णाली प्रदेश भित्रको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्ला हो । जिल्लामा उत्पादित खाद्यान्नले जिल्लावासीलाई पुग्ने कृषि बिकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख महेश आचार्यले बताउनुभयो । जिल्लामा उत्पादन भएको मकैँ निर्यात हुने र चामल जिल्लामा आयात हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।